သင်ယခုကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်အကောင်းဆုံး tequilas &4ကြောက်မက်ဘွယ် mezcals ၏ 17
FR : https://www.hebergementwebs.com/life/17-des-meilleures-tequilas-et-4-superbes-mezcals-a-essayer-maintenant
EN : https://www.hebergementwebs.com/life/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try
ES : https://www.hebergementwebs.com/la-vida/17-de-los-mejores-tequilas-y-4-mezcales-increibles-para-probar
GA : https://www.hebergementwebs.com/saol/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-right-now
AF : https://www.hebergementwebs.com/lewe/17-van-die-beste-tequilas-en-4-wonderlike-mezcals-om-nou-te-probeer
BS : https://www.hebergementwebs.com/život/17-od-najboljih-tekila-i-4-strasnih-mezkala-da-isprobate-upravo-sada
CY : https://www.hebergementwebs.com/bywyd/17-o-r-gorau-tequilas-a-4-awesome-mezcals-to-try-ar-hyn-o-bryd
DA : https://www.hebergementwebs.com/liv/17-af-de-bedste-tequilas-og-4-fantastiske-mezcals-at-prøve-lige-nu
ET : https://www.hebergementwebs.com/elu/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-proovige-kohe
HT : https://www.hebergementwebs.com/lavi/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-right-now
EO : https://www.hebergementwebs.com/vivo/17-el-la-plej-bonaj-tekilaj-kaj-4-timindaj-mezcals-por-provi-nun.
GL : https://www.hebergementwebs.com/vida/17-dos-mellores-tequilas-e-4-mezcals-impresionantes-para-probar-agora
HA : https://www.hebergementwebs.com/rayuwa/17-of-the-best-tequilas-and-4-madalla-mezcals-don-gwada-yanzu
FY : https://www.hebergementwebs.com/libben/17-fan-de-beste-tequila-s-en-4-geweldige-mezcals-om-no-te-besykjen
CS : https://www.hebergementwebs.com/život/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-right-now
HE : https://www.hebergementwebs.com/חַיִים/17-מתוך-הטובים-ביותר-טקילות-ו-4-מדהים-מזקלים-לנסות-עכשיו
BG : https://www.hebergementwebs.com/живот/17-от-най-добрите-текили-и-4-страхотни-мецали-да-опитате-точно-сега
BE : https://www.hebergementwebs.com/жыццё/17-з-лепшых-тэкіл-і-4-дзіўныя-мескалы,-каб-паспрабаваць-прама-зараз
ID : https://www.hebergementwebs.com/kehidupan/17-dari-tequilas-terbaik-dan-4-mezcals-mengagumkan-untuk-coba-sekarang
GD : https://www.hebergementwebs.com/beatha/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-an-drasta
FI : https://www.hebergementwebs.com/elämää/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-just-now
FA : https://www.hebergementwebs.com/زندگی/17-از-بهترین-تکیلا-و-4-جذاب-بزرگ-در-حال-حاضر-امتحان-کنید
CO : https://www.hebergementwebs.com/vita/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-right-now
HU : https://www.hebergementwebs.com/élet/a-legjobb-tequilak-kozul-17-es-a-4-fantasztikus-mezkal-most-probalkozni
DE : https://www.hebergementwebs.com/leben/17-der-besten-tequilas-und-4-fantastischen-mezcals,-die-es-jetzt-zu-versuchen-gilt
EU : https://www.hebergementwebs.com/bizitza/oraindik-saiatzeko-tekilarik-onenen-17-eta-4-mezcals-izugarriak
AM : https://www.hebergementwebs.com/ሕይወት/17-በጣም-ምርጥ-ተኪላዎች-እና-4-አስደናቂ-ሜዝካሎች-አሁን-ለመሞከር-
BN : https://www.hebergementwebs.com/জীবন/17-এর-সেরা-টেকিলাস-এবং-4-দুর্দান্ত-মজকাল-থেকে-এখনই-চেষ্টা-করুন
AR : https://www.hebergementwebs.com/الحياة/17-من-أفضل-تيكيلا-و-4-رهيبة-ميزكالس-لمحاولة-الآن
CA : https://www.hebergementwebs.com/la-vida/17-dels-millors-tequilas-i-4-mezcals-impressionants-per-provar-ho-ara-mateix
EL : https://www.hebergementwebs.com/ΖΩΗ/17-από-τα-καλύτερα-τεκίλα-και-4-φοβερά-mezcals-για-δοκιμάστε-τώρα
HR : https://www.hebergementwebs.com/život/17-od-najboljih-tekila-i-4-sjajnih-mezkala-za-isprobavanje-upravo-sada
GU : https://www.hebergementwebs.com/જીવન/17-ઓફ-બેસ્ટ-ટકીલીસ-અને-4-અદ્ભુત-મેઝકલ્સ-ટૂ-ટુ-ટ્રાય-હમણાં
AZ : https://www.hebergementwebs.com/həyat/17-dən-cox-olan-tekilalar-və-4-zəhmli-mezkallar-indi-sinanacaq
KO : https://www.hebergementwebs.com/생명/지금-당장-최고의-테킬라와-4-개의-멋진-메즈-칼-중-17-개
PT : https://www.hebergementwebs.com/vida/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-now
NL : https://www.hebergementwebs.com/leven/17-van-de-beste-tequilas-en-4-geweldige-mezcals-om-te-proberen-nu
LB : https://www.hebergementwebs.com/liewen/17-vun-de-beschten-tequilas-a-4-awesome-mezcals-fir-elo-ze-probeieren
IT : https://www.hebergementwebs.com/vita/17-delle-migliori-tequila-e-4-fantastiche-mezcal-da-provare-adesso
RU : https://www.hebergementwebs.com/жизнь/17-из-лучших-текил-и-4-потрясающих-мескалей-на-пробу-прямо-сейчас
KA : https://www.hebergementwebs.com/სიცოცხლე/17-საუკეთესო-ტეკილა-და-4-გასაოცარი-მეკალსი-ახლავე-გასინჯეთ
RW : https://www.hebergementwebs.com/ubuzima/17-ya-nziza-ya-tequilas-na-4-iteye-ubwoba-mezcals-kugerageza-ubungubu
RO : https://www.hebergementwebs.com/viaţă/17-dintre-cele-mai-bune-tequilas-și-4-mezcals-minunate-pentru-a-incerca-acum
ML : https://www.hebergementwebs.com/ജീവിതം/17-ൽ-മികച്ച-ടെക്വിലകളും-4-ആകർഷണീയമായ-മെസ്കലുകളും-ശ്രമിക്കാൻ-ഇപ്പോൾ
IG : https://www.hebergementwebs.com/ndụ/17-nke-nke-tequilas-kacha-mma-na-4-egwu-mezcals-to-try-right-now
MS : https://www.hebergementwebs.com/kehidupan/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-sekarang-juga
LV : https://www.hebergementwebs.com/dzīve/17-no-labakajiem-tekilam-un-4-lieliskajiem-mezcaliem,-lai-izmeginatu-tulit
OR : https://www.hebergementwebs.com/ଜୀବନ/17-of-the-best-tequilas-and-4-esome-mezcals-to-try-now
NO : https://www.hebergementwebs.com/liv/17-av-de-beste-tequilas-og-4-fantastiske-mezcals-a-prøve-akkurat-na
NY : https://www.hebergementwebs.com/moyo/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-pompano
MR : https://www.hebergementwebs.com/जीवन/17-ऑफ-बेस्ट-टकीला-आणि-4-अद्भुत-मेझकॅल्स-टू-ट्राय-आत्ता
PS : https://www.hebergementwebs.com/ژوند/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-همدا-اوس-هڅه-وکړئ
SD : https://www.hebergementwebs.com/زندگي/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-هاڻي-ڪوشش-ڪرڻ-لاءِ
KN : https://www.hebergementwebs.com/ಜೀವನ/17-ರಲ್ಲಿ-ಅತ್ಯುತ್ತಮ-ಟಕಿಲಾಸ್-ಮತ್ತು-4-ಅದ್ಭುತ-ಮೆಜ್ಕಾಲ್ಸ್-ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು-ಇದೀಗ
PA : https://www.hebergementwebs.com/ਜ਼ਿੰਦਗੀ/17-ਦਾ-ਸਭ-ਤੋਂ-ਵਧੀਆ-ਟੈਕੀਲਸ-ਅਤੇ-4-ਸ਼ਾਨਦਾਰ-ਮੇਜ਼ਕਾਲ-ਤੋਂ-ਕੋਸ਼ਿਸ਼-ਕਰੋ-ਹੁਣੇ
LT : https://www.hebergementwebs.com/gyvenimo/17-geriausiu-tekilu-ir-4-nuostabiu-mezkalu-bandyti-dabar
SI : https://www.hebergementwebs.com/ජීවිතය/උත්සාහ-කිරීමට-දැන්-හොඳම-ටෙකීලාස්-සහ-4-නියමයි-මෙස්කල්
MT : https://www.hebergementwebs.com/ħajja/17-tal-aqwa-tequilas-u-4-mezcals-tal-biza-biex-tipprova-dritt-issa
IS : https://www.hebergementwebs.com/lífið/17-af-bestu-tequilas-og-4-ognvekjandi-mezcals-til-að-reyna-nuna
PL : https://www.hebergementwebs.com/życie/17-najlepszych-tequili-i-4-niesamowite-mezcale-do-wyprobowania-juz-teraz
JA : https://www.hebergementwebs.com/生活/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-now
MN : https://www.hebergementwebs.com/амьдрал/Хамгийн-шилдэг-17-текилас-ба-4-гайхалтай-мезкалийг-яг-одоо-туршиж-үзээрэй
KK : https://www.hebergementwebs.com/өмір/Декларацияның-ең-жақсы-17-сі-және-4-керемет-мезкал.
KY : https://www.hebergementwebs.com/жашоо/Текиластардын-эң-мыкты-17си-жана-эң-сонун-4-мецкал-азыр-сынап-көрүңүз
VI : https://www.hebergementwebs.com/đời-sống/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-now
TT : https://www.hebergementwebs.com/тормыш/17-иң-иң-текилас-һәм-4-искиткеч-мезкаллар-хәзер-сынап-карарга
SQ : https://www.hebergementwebs.com/jeta/17-te-me-te-mirat-tequilas-dhe-4-tmerrshem-mezcals-per-provoni-tani
SV : https://www.hebergementwebs.com/liv/17-av-de-basta-tequilas-och-4-fantastiska-mezcals-att-forsoka-just-nu
TK : https://www.hebergementwebs.com/durmuş/17-in-in-tekila-we-4-ajayyp-mezkal-su-wagt-synap-gorun
SK : https://www.hebergementwebs.com/život/17-z-najlepsich-tequilas-a-4-uzasnych-mezcalov-na-vyskusanie-prave-teraz
XH : https://www.hebergementwebs.com/ubomi/i-17-ye-eyona-tequilas-kunye-ne-4-eyoyikisayo-mezcals-ukuzama-ngoku
SN : https://www.hebergementwebs.com/hupenyu/17-ye-yakanakisa-tequilas-uye-4-inotyisa-mezikiki-kuyedza-izvozvi
ZH-TW : https://www.hebergementwebs.com/生活/現在，有17款最佳龍舌蘭酒和4種超讚的mezcals可以嘗試
ZU : https://www.hebergementwebs.com/impilo/i-17-ye-the-tequilas-ne-4-emangalisayo-mezcals-ukuzama-manje
SW : https://www.hebergementwebs.com/maisha/17-ya-bora-tequila-na-4-ya-ajabu-mezali-kujaribu-sasa-hivi
TA : https://www.hebergementwebs.com/வாழ்க்கை/17-ல்-சிறந்த-டெக்யுலாஸ்-மற்றும்-4-அற்புதமான-மெஸ்கல்கள்-முயற்சிக்க-இப்போதே
SO : https://www.hebergementwebs.com/nolosha/17-ka-ugu-fiican-tequilas-iyo-4-cabsi-leh-mezcals-ah-isku-day-hadda
UR : https://www.hebergementwebs.com/زندگی/17-کی-سب-سے-بہترین-شرابی-اور-4-خوفناک-میزکلز-سے-ابھی-کوشش-کریں
UG : https://www.hebergementwebs.com/ھايات/17-ئەڭ-ياخشى-تېكساس-ۋە-4-قالتىس-مېزاللار-ھازىر-سىناپ-بېقىڭ
ST : https://www.hebergementwebs.com/bophelo/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-hona-joale
YO : https://www.hebergementwebs.com/igbesi-aye/17-ti-ti-o-dara-julọ-tequilas-ati-4-oniyi-mezcals-lati-gbiyanju-ni-bayi
YI : https://www.hebergementwebs.com/לעבן/17-פון-דער-בעסטער-טעקווילאַס-און-4-אָסאַם-מעזקאַלס-צו-פּרובירן-רעכט-איצט
TG : https://www.hebergementwebs.com/зиндагӣ/17-of-the-best-tequilas-and-4-awesome-mezcals-to-try-now.
UZ : https://www.hebergementwebs.com/hayot/hozir-sinash-uchun-eng-yaxshi-17-tekila-va-4-ta-ajoyib-mezkal
သင်ယခုကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်အကောင်းဆုံး tequilas (&4ကြောက်မက်ဘွယ် mezcals) ၏ 17
စက်မှုလုပ်ငန်းများ - agaveros, los jimadores, tequileros နှင့် mezcaleros ၏ unsung သူရဲကောင်းများ၏အနုပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှု။
“ ဒီကောက်ယူထားသည့်စာရင်းသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မဖော်ကျူးသောသူရဲကောင်းများရဲ့အမွေ၊ အနုပညာနှင့်လက်မှုလက်ရာများရဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုဖြစ်သည် - agaveros, los jimadores , tequileros နှင့် mezcaleros ။ Quinonezမှအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်မှာကျွန်ုပ်ရွေးချယ်ခဲ့သော tequilas နှင့် mezcales များသည်ကျွန်ုပ်၏အမြင်အရမက္ကဆီကိုအမွေအနှစ်များ၏အကောင်းဆုံးကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ခြွင်းချက်အရသာ, ဒါပေမယ့်လည်းမီတာအဘို့သူတို့ထုတ်လုပ်ကြသည်လမ်း။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်သတိနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောစိုက်ပျိုးရေးအလေ့အထများကိုအသုံးပြုကြသည်။ များစွာသောသူတို့သည် ၂၁ ရာစု၌အနုပညာနှင့်ရှားပါးသောတီဟонаကဲ့သို့သောဟစ်စပန်းနစ်မတိုင်မီကြိတ်ခြင်းကိုဆက်လက်အသုံးပြုကြသည်။ reposado နှင့်anejo tequilas ၏အပိုင်းအစအိုမင်းခြင်းရှိ၏ ဒဏ်ငွေရှားရီဝိုင်များ၏အိုမင်းခြင်း၌လေ့လာတွေ့ရှိနည်းစနစ်; နှင့်အထင်ရှားဆုံး profile များကို, စတိုင်များနှင့်အရသာပေါင်းစပ်ကယ်နှုတ်တော်မူရန်အများဆုံးရင့်ကျက် agave ၏လက်စွဲရွေးချယ်ခြင်း။ Cinco de Mayo သည်အစဉ်အလာအားမက္ကဆီကိုတွင်ကျင်းပခြင်းမခံရသော်လည်း၎င်းသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ tequila နှင့် mezcal အရောင်းရဆုံးအတွက်အားလပ်ရက်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် agave စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုမဆိုဆင်နွှဲရန်ရွေးချယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ထူးကဲသောအရသာသာမကထူးခြားသောဇစ်မြစ်ကိုပါတန်ဖိုးထားလေးမြတ်လိမ့်မည်ဟုသာကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ "
Cinco de Mayo အတွက်နှင့်အကောင်းဆုံး
GrReserva သည် tequila သောက်သူ၊ တရားသူကြီးများနှင့်စိတ်ဝင်စားသူများအကြိုက်ဆုံး
ဖြစ်သည်။ El Valle de Tequila ၏နှစ် ၆၀ အစဉ်အလာနှင့်အမွေအနှစ်များရှိသည့် El Tequilenoသည်ဈေးကွက်တွင်အရသာအရှိဆုံး reposado tequilas တစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့သည်” ဟုQuinonezကရှင်းပြသည်။ "ရှစ်လ reposados ​​နှင့် 18 လအရံanejos၏ဤရောနှောအစကနေအဆုံးအထိလုံးဝစုံလင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။ vanilla, အခွံမာသီး, သစ်သီးခြောက်နှင့်နံ့သာမျိုး၏ရဲရင့်သောမှတ်စုများ။ ငါကကြီးမားတဲ့ရေခဲတုံးများနှင့်ကောင်းသောကုမ္ပဏီနှင့်အတူ sipping ပျော်မွေ့။ "
" ဒီအသုံးအနှုန်းဟာမျိုးဆက်သစ်ငါးရာဆက်တိုက်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်သမိုင်းကိုအသုံးပြုပြီးအစဉ်အလာနှင့်အနုပညာလက်ရာများကိုအသုံးပြုပြီးအမွေအနှစ်တစ်ခုပါတဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်စက်ရုံမှလာတာဖြစ်တယ် " ၄၆% သော ABV sanc blanco သည်။ tequila ကိုနှစ်သက်သောသူတိုင်းအတွက်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်တောက်ပသောအသီးများနှင့်မှည့်သောချက်ပြုတ်ထားသော agave နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးလှပသောမြေသားမှတ်စုများကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။လုပ်သူများနှင့်သံပုရာ zest နှင့်အတူ ဦး ။
Tequila Ocho လူနေအိမ် Las Las Aguilas Plata
“ ထရူကစ်ထရီကာလာထုတ်လုပ်မှုမှာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္playsကနေပါဝင်ပါတယ်။ ကောင်းသောနတ်ဝိဇ္ဇာအတတ်များနှင့်ဝိုင်ထုတ်လုပ်သည့်နည်းတူအပင်တစ်ပင်ပေါ်တွင်ကြီးထွားလာသော agaves များသည်ကုန်းမြင့်ဒေသများတွင်အချိုဆုံးသောPinasအချို့ကိုပြုလုပ်သည်ဟုQuinonezကပြောကြားသည်။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဆေးပင်များ၊ သစ်သီးများနှင့်ပန်းများသည်တစ်ဖက်စီကိုမျှမျှတတနှင့်လှပစေသည်။ ငါတကယ်ကျောက်ဆောင်ပေါ်မှာဤ plata စတိုင်သောက်သုံးကြိုက်တယ်။ သင့်တွင်ပန်းသီးစိမ်း၊ သစ်သီးပင်စိမ်းကဲ့သို့သောလတ်ဆတ်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ "
" Cascahuin Tahona Blanco ဟာသဟဇာတဖြစ်မှု၊ မျိုးရိုးလိုက်မှုနှင့်မျှတမှုကိုပြသတဲ့အစစ်အမှန်ဖြစ်တယ် "ဟုQuinonezကပြောကြားသည်။ ချက်ပြုတ် agave, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, ချိုမြိန်အသီးအပွများနှင့်ဓာတ်သတ္တုဝိညာဉ်၏မှတ်စုများ။ ဒါကငါ့အကြိုက်ဆုံး tequila ဖြစ်ပါတယ်သူတို့၏စင်ကြယ်မှုနှင့်ကြော့ရှင်းမှုတို့အတွက် tahona စတိုင်ထီကီလာများ။ "
" သင်မြည်းစမ်းသည့်နေ့နှင့်အချိန်ကိုသင်မှတ်တမ်းတင်ရန်အထူးအကြံပြုလိုတယ် "ဟုQuinonezကအခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ ရင့်ကျက်သော agave အများစုသည်ဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ သူတို့ကရင့်မှည့်သောအိုမင်းခြင်းအားအသုံးပြုခြင်း၊ ရင့်မှည့်ရန်အတွက်အသုံးပြုသောစည်အမျိုးမျိုးကဲ့သို့သောပြင်သစ် Limousin သပိတ်ပင်၊ အမေရိကန်အဖြူရောင်သပိတ်ပင်နှင့်စပျစ်ဝိုင်စည်များသည်ထူးခြားသောအရည်များဖြင့်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ချက်ပြုတ်ထားသော agave၊ သစ်သီးခြောက်၊ နံ့သာမျိုးနှင့် caramel တို့၏မှတ်စုများသည် agavese နှစ်သက်သူမည်သူမဆိုအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်anejoစတိုင်ကိုပေးသည်။ "
" ဒီစကားလုံးဟာ Tequila ချိုင့်ဝှမ်းမှာရှိတဲ့ La Tequilenaမှအဓိပ်ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကိုလက်ဖြင့်ရွေးချယ်ထားသောပြည်နယ် Agaves ကိုသာအသုံးပြုသည်။ Don Fulano Blanco ကိုထုတ်လုပ်သည်။ Blanco tequilas - စနစ်တကျခွဲခြားခံရရန်ယေဘုယျအားဖြင့် vi မဟုတ်ပါထောင်ချီ။ ထို့ကြောင့်ခြောက်လကြာရှိသောမွှေးကြိုင်ခြင်းကိုမြည်းစမ်းခြင်းသည်မြေနှင့်မဂ်ဂရီတို့၏အကျိုးကိုတိုးပွားစေသည်။ အိုမင်းခြင်းကစျေးကွက်ထဲတွင်အရသာအရှိဆုံးအဖြူရောင် tequilas တစ်ခုကိုကမ်းလှမ်းရန်အတွက်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောသစ်သီးများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်နံ့သာမျိုးများမှတ်စုများကိုဖန်တီးပေးသည်။ အလင်း ">
" Fortaleza Blanco သည် NOM 1493 ၏အခြားအလှတရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် Fortaleza Blanco ကိုရောနှောထားသောသောက်စရာများသို့မဟုတ်ကျောက်ဆောင်များပေါ်တွင်လောင်းနိုင်သည် - ၎င်းသည်သင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမည်မဟုတ်ပါ ", Quinonez ဟုပြောသည်။ “ ဒါတွေအားလုံးဟာခေတ်မီဆန်းပြားပြီးသန့်စင်ပြီးချိုမြိန်လှတဲ့မှတ်စုများပါ။ ပေါင်းခံပြီးသောကြေးနီအိုးသည်အစဉ်အလာ tahona ကြိတ်ခွဲနည်းကိုအသုံးပြုသည်၊ ဓာတ်သတ္တုမှတ်စုများကိုထည့်သွင်း။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ထူးခြားသော tequila ဖြစ်စေသည်။ -light ">
" သူမဟာတကယ့်ကိုအလှတရားပါပဲ "ဟုQuinonezကပြောကြားသည်။ ဤ reposado သည်အသက်ခြောက်လမှရှစ်လအထိရှိပြီး၎င်းသည် reposado ဂန္ထဝင်ချိုင့်ဝှမ်းတွင်သင်လိုချင်သည်။ ချက်ပြုတ် agave, ပျားရည်နှင့်မှတ်စုများvanilla သည်နက်ရှိုင်းမှုနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြွယ်ဝသော၊ တောက်ပသောအရောင်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များနှင့်ပျားရည်မှတ်စုများကိုမြှင့်တင်ရန်ဒီ reposado ကိုလိမ္မော်ရောင်အကျိတ်များဖြင့်ပိုကျက်ပါသည်။ "
El Tequileno Reposado Rare El Tequileno
"El Tequileno Reposado Rare ဟာလုံးဝ၏ထူးခြားမှုတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ အိုမင်းခြင်းအားဖြင့် ၆ နှစ်ကျော်သက်တမ်းရှိသည့်anejo tequilas များကိုပေါင်းစပ်။ teakila လီတာ ၂၃၀၀၀ ကျော်သိုလှောင်ထားနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်၎င်း၏အရသာနှင့်အနက်နှင့်အတိမ်အနက်ကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည့်သပိတ်ပင်ရှိသောသစ်သားတူးစင်တစ်ခုတွင် pipon ဖြစ်သည်။ သစ်သီးခြောက်၊ မှည့်သောနာနတ်သီး၊ ပျားရည်နှင့်ချက်ပြုတ်ထားသော agave တို့၏ထူးခြားသောမှတ်စုများနှင့်အတူငါရဲရင့်သောအရသာနှင့်ဇိမ်ခံအရသာကိုအမှန်တကယ်ဖမ်းယူနိုင်ရန်တက်ကီလာဖန်ခွက်သို့မဟုတ်ရှမ်ပိန်ပုလွေကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်။
"ဒါကအုပ်စုရဲ့နေ့ခင်းဘက်သောက်စရာအကောင်းဆုံးပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ reposado သည် Bourbon စည်ဟောင်းများတွင်ရက်သတ္တပတ် ၈ ပတ်မျှအနားယူသည်။ ၎င်းတွင်ပျားရည်ပြုတ် agave၊ အပူပိုင်းသစ်သီးများ၊ သရက်သီးနှင့် apricot တို့၏မှတ်စုများပါ ၀ င်ပြီးနှာခေါင်းကြွယ် ၀ ပြီးနှာခေါင်းပါ ၀ င်သည်။ "
" La Gritona reposado သည် NOM 1533 စက်ရုံမှ၎င်း၏အထူးအရသာကောင်းမွန်သောအရသာကြောင့်သာမကထူးကဲသော master distiller ဖြစ်သော Melly အတွက်ပါ။ Barajas, "Quinonezကပြောပါတယ်။ Tequila ကို Master Distillers အနည်းငယ်ကသာထုတ်လုပ်နိုင်ပြီး၊ သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကအမျိုးသမီးထုတ်လုပ်မှုအဖွဲ့ပါ။ La Gritona သည် Jalisco မှ ၉ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အထိရင့်ကျက်သော agaves ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်ထို agaves သည်သကြားဓာတ်ပိုမိုထုတ်လုပ်သည်၊ ဒီ reposado အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပါသည်: ချက်ပြုတ်အပူပိုင်းသစ်သီးများ, ပျားရည်, နံ့သာမျိုး, လေးညှင်းပွင့အရိပ်အမြွက်အဖြစ်ပေါက်ကွဲအရသာဤမျှလောက်များစွာသောanise သည်အစကတည်းကမှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော reposado စတိုင် tequila ကိုဖန်တီးပေးသည်။
href=> "Quinonezကပြောပါတယ်။ ပန်းနာ၊ vanilla၊ သစ်ကြံပိုးနှင့်လေးညှင်းပွင့်များ၏မှတ်စုများပါရှိသည်။ အနံ့အရသာ၊ ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်မှုတို့၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်သပိတ်ပင်၊ ပျားရည်ဖုတ်သောအသီးအနှံနှင့်နံ့သာမျိုးများပါ ၀ င်သည်။ ကျိန်းသေစျေးကွက်အပေါ်ငါ့အကြိုက်ဆုံးanejosတစ်ခု။
"ဒီဟာကသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဒါမှမဟုတ်ရေခဲတုံးကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းသုတ်သင်နိုင်တဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိုပွဲပုံစံ reposado" ဟုQuinonezကပြောကြားသည်။ ၎င်းသည် arbol ငရုတ်ကောင်းနှင့်လေးညှင်းပွင့်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောနံ့သာမျိုးများနှင့်အတူချောကလက် vanilla, သစ်ကြံပိုးခေါက်နှင့် butterscotch နှင့်အတူကတ္တီပါခံစားမှုရှိပါတယ်။ အဆုံးမှာဖော်ပြနှာခေါင်း။ အဆိုပါတော်တော်လေးပုလင်းလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စကားပြောဆိုမှုအတွက်ပါစေ။
“ ဒီ reposado ၏ရဲရင့်သော၊ သစ်နှင့်သစ်လွင်ပင်ရိတ်တို့၏မှတ်စုများသည်ပျားရည်နှင့်ငရုတ်ပွတို့၏မှတ်စုများနှင့်အတူရှည်လျား။ ခြောက်သွေ့သောအဆုံးကိုဖြစ်စေသည်” ဟုQuinonezကရှင်းပြသည်။ ကျောက်တုံးများမှာသို့မဟုတ်ကြာရှည်သောက်ခြင်းဖြင့်ကမာသို့မဟုတ် ceviche နှင့်တွဲရန်အကြံပေးလိုပါသည်။
"Guanajuato မှအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကောင်းမွန်သောဂန္ထဝင်အလွန်ထူးခြားသည့်စတိုင်လ်ပုံစံ။ ဒီanejo အသက် ၁၂ လအရွယ်ရှိသပိတ်ပင်တွင်စည်၊ ၃၈% ABV တွင်ပုလင်းထည့်ပြီးထင်းသစ်သား၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အခွံမာသီးများနှင့်ချိုမြိန် piloncillo တို့၏ရဲရင့်သောအရသာများကိုရရှိသည်။ အစောပိုင်းမှအဆုံးအထိတောင့်တင်းသောဂန္ထဝင်အရသာများ။
Caballito Cerrero Blanco Caballito Cerrero
"၁၈၇၃ မှာစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး Santa Rita စက်ရုံက tequila ကို ၁၅ မျိုးဆက်ထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်။ "Quinonezရှင်းပြသည် "ဒီ blanco ၏ကျောက်မျက်ရှုပ်ထွေး, သဟဇာတနှင့်အတိမ်အနက်ကိုပေးထားပါတယ်။ ၎င်းသည်ကြွယ်ဝသောအရသာအမျိုးမျိုး - ပျားရည်ရိုင်း၊ ချက်ပြုတ် agave၊ လတ်ဆတ်သောမြက်ပင်၊ အပူပိုင်းသစ်သီးများ၊ အားကောင်းသော ၄၅% ABV blanco အနေဖြင့်၎င်းသည်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးအဖြူရောင် tequilas များထဲမှရှည်လျားပြီးကြွယ်ဝသော finish ကိုဖန်တီးသည်။ "
" ဒီanejoကိုငါသဘောကျတယ်။ bourbon, toffee, သစ်သီးခြောက်၊ သင်္ဘောသဖန်းသီးနဲ့စပျစ်သီးပျဉ်ခြောက်သွေ့မှုတွေကိုနှာခေါင်းပေါ်ကအရမ်းသဘောကျတယ် "ဟုQuinonezကပြောသည်။ တောက်ပပြီးချောချောမွေ့မွေ့သောအာခေါင်တွင်လှပပြီးကြွယ်ဝသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အချိုပွဲသို့မဟုတ်ဆေးပြင်းလိပ်အနိမ့်အမြင့်ဖြင့်ဤanejoကိုခံစားရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
"ဒီအသုံးအနှုန်းသည်ချိတ်ဆက်ရန်အကောင်းဆုံးသောဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ သစ်ကိုမှဟောင်းကမ္ဘာ။ Quinonezကချက်ပြုတ်ထားသောသစ်သီး၊ မီးခိုးနှင့်နံ့သာမျိုးများ၏ရိုးရာစတိုင် mezcal ကိုအကောင်းဆုံးမိတ်ဆက်ပေးသည်။ ဖက်ရှင်e tequila ။ Tequila ချိုင့်ဝှမ်းရှိ Zacatecas, Huitzila ရွာငယ်လေးတွင်ထုတ်လုပ်သောမာစတာ distiller Jaime Banuelosသည်ဟစ်စပန်းနစ်မတိုင်မီလက်မှုပညာဆိုင်ရာထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့်မျှတမှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ "
" ဒီအလှအပအတွက်သင့်လက်ကိုရရှိတာဟာဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းလိုက်သလဲ "ဟုQuinonezကပြောသည်။ San Bartolo သည်နှစ်ပေါင်း ၅၀ သမိုင်းဝင်ပံ့ပိုးမှုဖြင့် CRM (Consejo Regulador del Mezcal) မှအသိအမှတ်ပြုထားသောဆုရမက်ဇကာမြို့၏ Valentine MartinezLopezမှလှပသော Yautepec ရွာတွင်ထုတ်လုပ်သည်! သဟဇာတဖြစ်မှုနှင့်မျှတမှုများစွာ - ပန်းချီများ၊ ရောမနှင့်နာနတ်သီးနှင့်သရက်သီးကဲ့သို့သောအပူပိုင်းသစ်သီးများသည်ရောစပ်ပြီးငရုတ်ကောင်းနှင့်မီးခိုးငွေ့များဖြင့်သန့်စင်ပြီးအရည်မြင့်မားစေသည်။ အဲဒါကကျွန်မကိုနားကနေနားကိုပြုံးစေတယ်။ အမျိုးအစားတစ်ခုအံ့သြဖွယ်သန့်စင်ပြီးကိုယ်စားပြုမှု။
"Tosba mezcal သည်ဝေးလံခေါင်သီသောရွာမှOaxaca မှ de San Cristobal Lachirioag သည်စိတ်အားထက်သန်မှု၊ အမွေအနှစ်နှင့်ရပ်ရွာလူထုနှင့်မြေယာအပေါ်အထူးကတိက ၀ တ်ပြုမှုကိုဖော်ပြသည်။ “ ရဲရင့ ်၍ ထုတ်ဖော်ပြသခြင်း၊ မြေသား၊ ဒီသန့်ရှင်းတဲ့ရှမ်ပိန်ပုလွေကိုမြည်းစမ်းကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။
Derrumbes San Luis Potosi Crassispina Salmiana Mezcal Joven "ဒီအသုံးအနှုန်းကိုရိုင်းစိုင်းတဲ့ agave ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပါတယ်။ ဆန်လူးဝစ်ပိုတိုစီ၏ကုန်းမြင့်မြင့်။ ချာကာ့စ်ကျေးရွာမှသဲကန္တာရ၌စိုက်ပျိုးသောမဇကာသည်မက္ကဆီကိုရှိအခြားနေရာများနှင့်မတူဘဲ ပို၍ ချိုသည်၊ ပန်းနှင့်အပင်ပေါင်းစပ်သည့်မက်ဇကာကိုပေးသည်။ s ၏အရွက်ကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်စကားရပ်၏မျှတမှုနှင့်ပြင်းထန်မှုalmiana ခြောက်နှင့်ချက်ပြုတ်နေစဉ်လောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုရန်ကိုးကားချက်များ။